ဝက်ခြံဖြစ်စေတဲ့ အသားအရေထိန်းသိမ်းမှု နည်းလမ်းအမှား ၇ ချက် - ONE DAILY MEDIA
မမျှော်လင့်ဘဲ သွားတိုက်ခြင်းနှင့် မျက်နှာကို ဆေးကြောခြင်းများဟာ အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာ ဝက်ခြံဖြစ်နိုင်ခြေကို တိုးလာစေနိုင်ပါတယ်။ သင့်အသားအရေအတွက် လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာအားလုံးကို သင်လုပ်ဆောင်နေသလို ခံစားရနိုင်သော်လည်း ကွဲပြားမှုများမှာ မရှင်းလင်းသေးပါဘူး။
ကျွန်ုပ်တို့၏ မည်သည့်အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုအမှားများသည် ကျန်းမာပြီး ကြည်လင်သောအသားအရေကို ဖျက်စီးနိုင်သည်ကို ရှာဖွေရန် သုတေသနအချို့ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
မိတ်ကပ်ဖျက်ဆေးများသည် ဝက်ခြံပေါက်ခြင်းမဖြစ်နိုင်သော်လည်း ဝက်ခြံဖြစ်စေနိုင်သော အညစ်အကြေးများနှင့် မိတ်ကပ်အကြွင်းအကျန်များကို ချန်ထားနိုင်ပါတယ်။ သုတ်ဆေးများတွင် အရက်၊ အမွှေးအကြိုင်များနှင့် အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများ ပါ၀င်ပြီး အသားအရေကို ခြောက်သွေ့စေပါသည်။ သင့်အရေပြားသည် ထိခိုက်လွယ်ပါက၊ ပွတ်တိုက်ခြင်းက ၎င်းကို ယားယံစေပြီး သင့်ချွေးပေါက်များကို ပိတ်ဆို့ကာ ရောင်ရမ်းခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
2. နေရောင်ကာခရင်မ်ကို မှားသုံးခြင်း
သင့်အသားအရေကို နေရောင်ခြည်မှ ကာကွယ်ရန် အရေးကြီးသော်လည်း၊ အချို့သော နေရောင်ကာခရင်မ်များသည် ဝက်ခြံပေါက်ခြင်းကို အထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ အချို့သော နေရောင်ကာလိမ်းဆေးဖော်မြူလာများသည် အရေပြားကို ယားယံစေပြီး ကွဲထွက်ခြင်းကိုဖြစ်စေသော အဆီအခြေခံသော အော်ဂဲနစ်စစ်ထုတ်မှုများကို အသုံးပြုပါတယ်။။ အခြားနေရောင်ကာခရင်မ်များသည် ချွေးပေါက်များကိုပိတ်ဆို့နိုင်ပြီး အပြစ်အနာအဆာများနှင့် အမည်းစက်များကို ပေးစွမ်းနိုင်သော ထုတ်ကုန်များဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အရေပြားကို ကာကွယ်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ SPF ပါရှိသော အစိုဓာတ်ထိန်းခရင်မ်ကို ရွေးချယ်ပြီး အသားအရေကို သန့်ရှင်းပြီး အမြဲသုံးရန်ဖြစ်ပါတယ်။
3. မျက်မှန်ကို မသန့်ရှင်းခြင်း
သင့်မျက်မှန်တစ်ဝိုက်တွင် မကြာခဏ ဝက်ခြံပေါက်ပါက၊ ဖရိန်များကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် မေ့ နေသည့် ကြောင့်ဖြစ်နိင်ပါတယ်။ သင့် ဝက်ခြံအတွက် ပြဿနာရှိသည့်နေရာများကို ဆရာဝန်များက ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီး သင့်မျက်မှန်ဘောင်၏ ထိုအပိုင်းကို တစ်နေ့တစ်ကြိမ် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် အကြံပြုထားပါတယ်။ သင့်မျက်မှန်များသည် အလွန်ကြပ်နေနိုင်ပြီး အရေပြားဆဲလ်သေများကို ချွေးပေါက်ထဲသို့ ပြန်တွန်းပို့ခြင်းဖြင့် သင့်ချွေးပေါက်များကို ပိတ်ဆို့သွားနိုင်ပါတယ်။ သင့်မျက်မှန်၏ အံဝင်ခွင်ကျမှုကို ချိန်ညှိခြင်းသည် ချွေးပေါက်များပိတ်ဆို့ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။
4. အလွန်အကျွံ မျက်နှာသစ်ခြင်း
သင့်အရေပြားကို သန့်စင်ခြင်းသည် ဝက်ခြံကို တိုက်ဖျက်ခြင်းနှင့် ကာကွယ်ခြင်းတွင် မရှိမဖြစ်အဆင့်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း။အလွန်အကျွံ ဆေးမိခြင်းသည် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။ အရေပြားဆရာဝန်တွေက အရေပြားကို အလွန်အကျွံ သန့်စင်တာက ဟန်ချက်မညီမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ပိုလျှံနေသော အဆီများကို ခြောက်သွေ့အောင် ကူညီပေးရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ထုတ်ကုန်များစွာကို အသုံးပြုခြင်းသည် သင့်အရေပြားကို ခြောက်သွေ့စေပြီး သင့်အဆီဂလင်းများမှ အဆီပိုထွက်စေပြီး ဝက်ခြံထွက်ခြင်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
5. ဆံကေသာထုတ်ကုန်များ အလွန်သုံးစွဲခြင်း
သင့်ဆံကေသာကို ချောမွေ့အောင် ကူညီပေးတဲ့ ဆံကေသာ လိမ်းဆေးအချို့က သင့်ကို ဝက်ခြံဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ခေါင်းလျှော်ရည်၊ လိမ်းဆေးများနှင့် စတိုင်လ်ကျစေသော ထုတ်ကုန်များဟာ ဆံပင်လိုင်းတစ်လျှောက်နှင့် နဖူးတွင် ဝက်ခြံအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဤထုတ်ကုန်များ သင့်မျက်နှာပေါ်သို့ ရောက်သွားပါက၊ ၎င်းတို့သည် သင့်ချွေးပေါက်များကို ပိတ်ဆို့ကာ သင့်အသားအရေကို ယားယံစေနိုင်ပါတယ်။
6. ရေချိုးရင်း မျက်နှာသစ်ခြင်း
ရေချိုးသောအခါတွင် လူတို့ဟာ ပူနွေးသောရေကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ ရေနွေးပူပူသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ မျက်နှာအရေပြားကို ထိခိုက်စေပြီး အရေပြားအတားအဆီးများကို ပျက်စီးစေနိုင်တာ‌ ကြောင့် အရေပြားပေါ်ရှိ သဘာဝအဆီများကို ခြောက်သွေ့စေပြီး ယားယံခြင်းကိုလည်း ဖြစ်စေပါတယ်။
7. လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးနောက် သန့်ရှင်းရေးမလုပ်ခြင်း
Gym ဆော့ပြီးနောက် ရေပုံမှန်မချိုးခြင်းက ဝက်ခြံထွက်စေနိုင်ပါတယ်။ ချွေးထွက်ခြင်းကြောင့် သင့်အရေပြားပေါ်ရှိ ဘက်တီးရီးယားများသည် သင့်ချွေးပေါက်များကို ပိတ်ဆို့စေပြီး ကွဲထွက်ခြင်းအထိ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အရေပြားဆရာဝန်များသည် ချွေး၊ အဆီနှင့် အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားရန် လေ့ကျင့်ခန်းပြီးပြီးချင်း ရေချိုးရန် အကြံပြုထားပါတယ်။
သင်ရော အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ အမှားအယွင်းတစ်ခုခုကို လုပ်ဖူးပါသလား။ ဝက်ခြံပေါက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ တခြားအရာတွေကို သတိပြုမိပါသလား, ဝေမျှခဲ့နိုင်ပါတယ်။
တီဗွီရှိူးမှတဆင့် ကိုယ်အလေးချိန်ကျအောင် ကူညီပေးပြီး ကြိုးစားရကျိုးနပ်အောင်အံ့အားသင့်ဖွယ်ရလဒ်တွေ ယူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်း 17 ခု